कोरोना त्रास र पत्रकारकी श्रीमती
जवा शिवाकोटी (गौतम) काठमाडाैं, ७ जेठ
फेसबुक म्यासेन्जरमा टङ्टङ् घण्टी बज्यो । मेसेन्जर चेक गरें । एक शुभचिन्तककले लेखको लिंक पठाएकी रहिछन् । उनले त्यो लेख मलाई पठाउनुको कारण त्यसको शीर्षक थियो– म पत्रकारकी श्रीमती ।
म पत्रकारिता पेशामा नभएपनि पत्रकारिताको विद्यार्थी हुँ । श्रीमानसँग पत्रकारिता पढ्दा देखि साथमा छु । पत्रकारिता गर्दै गर्दाका चुनौती र समाजले हेर्ने नजरमा कति फरक छ भनेर मैले अनुभव गरेकी छु ।
पत्रकारिता पढ्दै गर्दा होस् वा पत्रकारसँग विहे गर्दा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिले वेला वेलामा गर्ने प्रश्न पत्रकार रोजेको भन्ने आइरहन्छ ।
मेरो मष्तिकमा पनि नर्स हुँदै डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने सोच नआएको होइन । तर विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमै पत्रकार राज्यको चौथो अंग हो भनेर पढेकी थिँए ।
त्यस बखत देखि नै लाग्थ्यो जुनसुकै पेशा पनि आफैमा मान्य छ । जसले मलाई पत्रकारिता पढ्न हौसायो । पत्रकारसँग नै विवाह हुने वातावरण पनि बन्यो ।
यति वेला विश्व नै कोविड–१९ ले आक्रान्त छ । विश्वभर झण्डै तीन लाख बढी मानिसले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो रहेन । संक्रमणकै कारण सुत्केरी आमाले सन्तानलाई नाम नै दिन नपाइ ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
संक्रमणको जोखिमकै कारण देश लक डाउनमा छ । दिन प्रतिदिन संक्रमितहरु बढ्दो क्रममा छन् । यो समय आम नागरिक सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनको पालनामा घर भित्रै छन् ।
तर स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीले आफ्नो दायित्व भुलेका छैनन् । दायित्व बोधसँगै उनीहरु नै सबैभन्दा बढी जोखिममा समेत छन् । थाहा छैन कहाँबाट कहिले र कसरी सुत्केरी महिलाले जस्तै कतिले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो ।
म ६ वर्षे छोरा सहित लक डाउनको पालनामा नै छु । म जस्तै कैयौं सुरक्षाकर्मी, स्वस्थ्यकर्मीका परिवार पनि पक्कै लकडाउनको पालनामा नै छन् ।
फिल्डमा जानै पर्ने बाध्यता भएका श्रीमानको चिन्तामा धेरैका श्रीमती र परिवारका सदस्यहरु चिन्तित छन, जति म छु । राज्यको सुरक्षा अंगसँगै राज्यले नै मानेको चौथो अंग भएर काम गरिरहेका पत्रकार र तिनका परिवारमा परेको असर भोगेकाहरुलाई बाहेक कमैलाई मात्र अनुभव होला ।
छ बर्षको छोराले हरेक साँझ बाबाको पर्खाइमा हातमा सेनिटाईजरको बोतल बोकेर बस्दा होस वा त्यो बाल मष्तिकले बाबा पत्रकार भएर लकडाउनमा पनि अफिस जानु परेको हो है ? भन्दा फेरी एक पटक मन झस्किन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा संक्रमित बढेको सुचनामात्रै सेयर भएको देखिन्छ । ‘उदयपुरमा फेरी एक जना पत्रकारमा संक्रमण, संक्रमित पत्रकारको संख्या चार पुग्यो ।’ यस्ता हेडलाइनले श्रीमानको पेशाप्रति डर लाग्छ । र मन वुझाउँछु, मेरो श्रीमान भन्दा वढी जोखिम मोलेर स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटेका छन् ।
दिनभरको रिपोटिङपछि पत्रकार श्रीमान साँझ घर आउँदा छोरोले ढोकाबाटै सुरक्षाका उपाययबारे बाबालाई सिकाउन थाल्छ । लगाएको मास्क बाहिरै राख्न र साबुन पानीले हात धुन आग्रह गर्छ ।
घरमा त सुरक्षाका विषयमा हामी सबै जिम्मेवार नै छौं । छोरोले सिकाए जस्तै । प्रश्न उठ्छ, ‘राज्यले के गर्दै छ फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, अत्यावस्यक सेवाका कर्मचारी र पत्रकारका लागि ?’
‘तिमी तराइको जिल्ला गएर आएको पिसिआर टेस्ट गर्यौ ?’, सोमबार बिहानै श्रीमानलाई पत्रकार महासंघका महासचिवको फोन आयो । श्रीमानले अलमलाए जस्तो गरेर जवाफ फर्काउनु भयो, ‘छैन तर चेक गर्न मन छ ।’ लगत्तै जवाफ आयो, ‘आज चेक हुँदैछ, तिम्रो पनि गर्नुपर्छ ।’
श्रीमान स्वाब दिन निस्कनु भयो । मनमा फेरी अनेक प्रश्नहरुले खैलाबैला मच्चाए ।
श्रीमान कै पत्रकार साथीकी श्रीमतीहरुपनि मेरो फेसबुकका साथी छन् । वेला वेलामा सोधिरहन्छन्– वुढा अफिस की घरमा ? उनीहरु भन्छन्– घरमै बसेर काम गर्नुस न भन्न मन लाग्छ तर मुखै लाग्दैन, पेशानै त्यस्तै छ, फिल्डमा पुग्नैपर्ने ।
पत्रकार भन्दा जोखिमका स्वास्थ्यकमीृ र सुरक्षाकर्मीका परिवारमा म पत्रकारकी श्रीमतीमा भन्दा वढी छटपटी होला ।
यो जटिल परिस्थितिमा घर बसी बसी सुसुचित हुन पाउने जनताको अधिकारलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झिने पत्रकारको र उसको परिवारको चिन्ता कसले लिने ? कहिले समाचारको विषय त कहिले समाचार बनेर छापिएर आएका विषयका कारण सृजना हुने अवस्थाको चुनौती पनि पत्रकारकै काँधमा कहिलेसम्म ? यस्ता प्रश्न सधै आउने गर्छन ।
तर पनि आफूलाई भुलाउने प्रयत्न गर्छु । पत्रकारिताको धर्म सम्झेर । सहज बेला त सबैले काम गर्छन, असहज अवस्थामा नै हो जनतालाई सुचना चाहिने । तर पनि लाग्दो रहेछ– राज्य त छ ?
जटिल समयमा पनि आफ्नो घर परिवार नभनी ज्यानको बाजी थापेर काम गर्ने र कर्तव्य बुझेर अगाडि बढ्ने पत्रकारिता पेशा अन्य पेशा भन्दा कम सम्मानित पेशा हुँदै होइन । तर हिजो आज पत्रकारितका नाममा जनतालाई भ्रममा पार्ने र गलत कुरालाइ फैलाउनेहरुको जमात पनि कम छैनन् ।
यस्तो समयमा पनि आफ्नो कर्तव्यलाई बुझेर सत्य तथ्य समाचार दिएर अग्रपंक्तिमा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई भोलिका दिनमा सबैले गर्व गर्न सकुन् । एउटी महिलाले श्रीमानको पेशालाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सम्मान गर्नुपर्छ । तर जब राज्य नै त्यो जिम्मेवार पेशाप्रति चिन्तित हुँदैन भने कताकता राज्यको जिम्मेवारी प्रति पनि प्रश्न उठ्दो रहेछ ।
सरकारबाट त्यस्तो निर्णय आओस जसले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र म जस्तै पत्रकारकी श्रीमती र उनका परिवारलाई संकटको घडीमा पनि आत्मबल प्रदान गर्न सकोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ७, २०७७, १७:१५:००
जवा शिवाकोटी (गौतम) जवा शिवाकोटी (गौतम)